TP-LINK na-ewetara ekwentị mkpanaaka ọhụụ: Neffos Y5L | Gam akporosis
O doro anya na mgbe ịmalitere ịgụ aha post a, a ga-ahapụ gị nwere ihu poker iji hụ otu TP-Link, a ụlọ ọrụ raara nye netwọk, na-emikpu na mberede na imepụta gam akporo smartphones. Ee, ọ na-ada ụda, mana mgbe anyị hụsịrị Osborne wepụtara akara aka ya na onye nrụpụta Asia, anyị nwere ike ịtụ anya ihe ọ bụla. N'ọnọdụ ọ bụla, anyị na-eche ụlọ ọrụ siri ezigbo ike nke hụla ahịa nwere ike ịnweta na gam akporo.
TP-LINK mara ọkwa Neffos Y5L, nke anọ ama ama na Neffos usoro mgbe C5L, C5 na C5 Max, ọnụ na-ekpughere tupu afọ a. Anyị na-ekwu maka ntinye ntinye ya na ihuenyo FWVGA nke anụ ọhịa 4,5, nke na-arụ ọrụ ekele mgbawa Qualcomm Snapdragon 210 quad-core ma nwee Android 6.0 Marshmallow. Ọnụ nke yiri ka ọ na-atọ ụtọ ịmara onye si na ya.
E wezụga atụmatụ ndị ahụ na ihuenyo, mgbawa na nsụgharị gam akporo, TP-LINK Neffos Y5L nwere a Igwefoto megapixel 5 n'azụ na autofocus na ikanam flash na 2MP n'ihu igwefoto. N'ebe a, ọ dị mkpụmkpụ, mana gịnị ka anyị ga-atụ anya na ekwentị nke na-elekwasị anya na njedebe dị ala na-enweghị nnukwu ngosi. Ihe a haziri ahazi dị mma ma tinye anyị n’ihu ekwentị gam akporo.
Nka na ụzụ nkọwa nke TP-LINK Neffos Y5L
4,5-anụ ọhịa (854 x 480 pikselụ) FWVGA IPS ihuenyo
Qualcomm Snapdragon 210 (MSM8909) quad-isi kuru ke 1.1 GHz
Adreno 304 GPU GPU
Nchekwa 1 GB Ram
8 GB nke nchekwa dị n'ime nwere ike ịgbasa ruo 32GB na micro SD
5 MP n'azụ igwefoto na ikanam flash
2.020 mAh batrị
TP-LINK Neffos Y5 dị na ọcha, oji na odo, na ga-abia na Europe, Asia, Middle East na Africa. Anyị amaghị ọnụahịa ahụ, mana a ga-ekwupụta ya n'oge na-adịghị anya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » TP-LINK na-ebupụta Neffos Y5L na ihuenyo 4,5-inch, Snapdragon 210 na gam akporo 6.0
[APK] Budata ma wụnye igwefoto LG V10 na-enweghị mgbọrọgwụ